Haweeney lagu dilay Degmada Hodon ee Magaalada Muqdisho iyo faahfaahin laga helay - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Haweeney lagu dilay Degmada Hodon ee Magaalada Muqdisho iyo faahfaahin laga helay
Koox bistoolado ku hubeysan ayaa magaalada Muqdisho saaka ku dishay qof haweeney ah oo warar kala duwan kasoo baxayaan dilkeeda.
Haweeneydan ayey wararku sheegayaan inay ka tirsaneyd ciidamada Dowladda Federaalka, waxaana dableyda ay saaka weerar ku qaadeen xilli ay ku sugneyd Hoygeeda oo ku yaalla agagaarka Isbitaalka Digfeer ee degmada Hodan, Magaalada Muqdisho.
Marxuumad Dahabo Jimcaale Tooxow Cali ayaa la sheegay inay rasaas ku fureen ragga ku hubeysnaa bistooladaha ee gurigeeda ku weerarray, waxayna ka baxsadeen goobta markii ay khaarijiyeen.
Falalka dilalka khaarijinta ah iyo qaraxyada ayaa muddooyinkii danbe kusoo badanaya caasimadda Muqdisho, waxaana ugu danbeeyay laba qarax oo dhalay ka dhacay Muqdisho.
Previous articleGo’aan kasoo baxay kulan fogaan-arag ah oo ay yeesheen RW Rooble iyo Madaxda maamul Goboleedyada
Next articleSaraakiishii Ciidamada AMISOM ee xasuuqa ka geystay Golweyn oo Dil Toogasho ah lagu xukumay